उहाँहरू पा’र्टीलाई ध्वं’स गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली:: Mero Desh
उहाँहरू पा’र्टीलाई ध्वं’स गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली
Published on: ४ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:१५
काठमाडौँ —कर्णाली प्रदेशका मु’ख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट वि’श्वासको म’त लिएका छन्  एमालेका चार सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उ’ल्लं घन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि उनको पद जो’गिएको हो  । शाहीको पक्षमा एमालेका ४, उनको दल माओवादी केन्द्र का १२ र कांग्रेसका ६ सहित २२ सां’सदले म’तदान गरेका छन्  यसै स’न्दर्भमा प’रराष्ट्रम’न्त्री तथा एमाले प्र’वक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी :
कर्णालीमा सांसदहरूले गरेको फ्लोर क्र’सलाई कसरी लिनु भएको छ ? यो संसदीय प्र’णालीमा अक्षम्य र का’र बाहीको विषय हो यो अ’वस्था किन आयो ? यो धेरै अ’प्र त्याशि’त चाहिँ होइन  । एउटा पक्षले पा’र्टीलाई कमजोर बनाउन को’सिस गरिरहेको थियो । त्यसकै प्र’कटीक’रण हो । पार्टीलाई भित्रैबाट ध्वं’स गर्ने प्र’यास केही साथीले गर्नुभएको थियो, त्यसबाट यो घ’टनालाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन ।
पार्टीभित्रको अ’सन्तुष्ट समूहको नि’र्देशन अनुसार नै कर्णा ली मा फ्लोर क्रस भएको हो ? त्यो प्रस्ट देखिन्छ । कसैको आड भरोसाबेगर त्यहाँ यति ग’म्भीर तहको गल्ती हुन सक्दैन । यसले त पार्टी वि’भाजन नै भयो होइन ? केही साथी पार्टी वि’भाजन मा लागिरहनुभएको छ ।
उहाँहरूको ध्याउन्न nर सेवाभाव अ’न्यत्रै छ । उहाँहरूले अलग पार्टीका रूपमा अभ्यास गर्न खो’ज्नुभएको थियो । सडकबाट का’रबाही गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै हिँड्नुभयो । फागुन २३ पछि त्यो प्र’क्रिया रोकिएला भन्ने सोचेका थियौं  । तर त्यो रोक्नुभएन  । उहाँहरू एकता होइन, पार्टीलाई ध्वं’स गर्ने बाटो मा हुनुहुन्छ ।
गण्डकीमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव द’र्ता भएको छ, अरू प्रदेशमा यस्तो स’म्भावना देखियो नि  ? यही नि’ष्कर्षमा पुग्न अझै केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रका केही व्यक्ति त्यो एक्स्ट्रिममा पुग्नुहुन्न भन्ने सु’निश्चित छैन । प्रदेश हरू त’रंगित हुन थाले, अब यसको बाछिटा केन्द्र सरकार सम्म पनि आइपुग्छ होला नि ?
केन्द्रीय सरकार हटाउन एक डेढ वर्षदेखि कोसिस भइरहे कै छ । सक्ने/नसक्ने भन्ने मात्र हो । हामीलाई सरकारको भविष्यभन्दा पनि देशको न’वस्थापित राजनीतिक प्र’णाली र स’मग्र भविष्यबारे चि’न्ता छ । प्र’मुख कुरा हामी कस्तो पार्टी नि’र्माण गर्दै छौं र कस्तो प्र’णाली बनाउँछौं भन्ने हो  । जसरी पनि मुलुकमा राजनीतिक वि’कृति नहोस् भन्ने हो । तर केही मानिसको ध्या’उन्न नै सरकार बदल्ने र त्यसलाई नै क्रा’न्ति, लोकतन्त्र ठान्ने वि’कृत राजनीतिमा छ ।
जनता स’माजवादी पार्टीसँग केन्द्र सरकार जोगाउन भइ रहे को वा’र्ताचाहिँ कुन तहमा पुग्यो  ? हाम्रा कुराकानी सरकारको प्र’तिरक्षाका लागि मात्र छैनन् । छलफल गर्दै जाँदा त्यो विषय पनि एउटा ए’जेन्डा होला । हामी सं’सद्मा रहेका सबै दलसँग रचनात्मक सं’वादबाट अ’घि बढ्न चाहन्छौं ।
जनता समाजवादी पार्टीले केही विषय उठाएको छ । संवि धानसँग जोडिएका केही प्र’शासनिक नि’र्णयसँग पनि जोडिएका विषय छन्  नि’ष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं  अ’नु चित स’म्झौता गरेर सरकारमा टिकिराख्न ज’रसरी छैन । मुलुकलाई ब’र्बाद हुने दि’शातर्फ नलैजा नका लागि अ’न्तर वि’रोध न्यू’नीकरण होस् भन्नेमा छौं  ।
हामीले विप्लव र सीके राउतसँग त स’मझदारी नि’र्माण गर्‍यौं भने अब संविधानभित्रका शक्तिलाई त मिलाएर जाने अ’धिकतम को’सिस गर्छौं नै । केन्द्रमा पनि अ’विश्वासको प्र’स्ताव ल्याउने को’सिस हुँदै छ ! यता पनि फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था आयो भने के गर्नु हुन्छ ? जुनसुकै प्र’स्ताव सा’म ना गर्छौं हामीलाई यसमा कुनै चि’न्ता छैन ।स्रोत कान्तिपुर